डा. भट्टराईलाई अर्को झट्का, नयाँ शक्तिका एकमात्र निर्वाचित सांसद नैं कांग्रेसमा प्रवेश !
मङ्गलबार ७ फाल्गुण, २०७५
काठमाडौं । अहिले नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई देशभरी जनसंवाद कार्यक्रम लिएर अगाडी बढीरहेका छन् । तर, प्रदेश ३ का एकमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद प्रेम तामाङ नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने भएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिका सांसद तामाङ नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् । उनलाई पार्टी प्रवेश गराउनको लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा फागुन १३ गते रसुवा जान लागेको कांग्रेस नेता गगन थापाले बताएका छन् ।
तामाङ कांग्रेसमा प्रबेश गर्न लागेको बताई पनि पार्टीले आफनो आधिकारीक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन । उनी के कारणले पार्टी प्रवेश गर्न लागेका हुन भन्ने कुनै कुरा खुलाइएको छैन् ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका मोहन आचार्य विजयी भएका थिए भने प्रदेशमा नयाँ शक्तिका प्रेम तामाङ र कांग्रेसका प्रभात लामा बिजयी भएका थिए । रसुवाका लोकप्रिय नेता समेत रहेका तामाङ कांग्रेसमा प्रबेश गर्न लागेको खबरको यतिबेला निकै चर्चा भईरहेको छ ।
संसद् पुनःस्थापना भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए